Geology, hydrology, flora na fauna nke ugwu Apennine | Netwọk Mgbasa Ozi
Otu n'ime ugwu ndị ama ama na ọdụ ụgbọ mmiri thetali bụ Cordillera de los Apennines. Ọ bụ aha ya n'ihi ịbụ akụkụ nke ọkpụkpụ anụ ahụ nke ala a. Ọ bụ usoro ugwu nke ihe dịka 1.400 kilomita n'ogologo na obosara nke dịgasị n'etiti 40 na 200 kilomita. Ọ nwere akụ na ụba dị ndụ na ọtụtụ ahịhịa na ahịhịa nke na-eme ka ọ bụrụ gburugburu ebe obibi nke ga-eme ka eleta.
N’isiokwu a anyị ga-ekwu maka njirimara, geology, flora na fauna nke ndị Apennines.
2 Ihu igwe na gburugburu ebe obibi nke Apennines
3 Apennine Nkewa
4 Hydrology, osisi na osisi
Usoro ugwu a na-esi na ngafe Cadibona, nke dị na mgbago ugwu ọdịda anyanwụ, gaa na Egadi Islands, nke dị n'ebe ugwu nke Sicily. O nwere elu elu 2.914 nke a maara dị ka Corno Grande. Ọ bụrụ na anyị enyochaa ya site na mbara ala, Apennines bụ akụkụ nke ugwu ugwu a maara dị ka Atlas, nke na-amalite site na North Africa ma gafere Dinaric Alps, na-agafe na mpaghara Balkan.
Ihe omumu banyere ala ya di egwu. N'otu aka, anyị na-ahụ ájá na marls na mpaghara ugwu, na Liguria. Na ndịda nke peninshula na Sicily anyị nwere ike ịhụ nnukwu outcrops nke calcareous nkume na-kewapụrụ site na ala ebe na shale na sandstones.
Ọ bụ nwata etolite etoliteghi mbido ya. Nke ahụ ọ bụ anyị nwere ike ịchọta ọnụ ọnụ akpọrọ nke ọma nke mbibi na oge agafebeghị. Tụkwasị na nke a, ha nwere ọtụtụ mmejọ na ebe dị iche iche na-eme ka mpaghara ndị dị nso na-emetụta oke ala ala na oke ugwu na-arụ ọrụ. N'agbanyeghị na ọ bụ ugwu ugwu, ikuku na mmiri na-emetụta ike mbuze. Oké osimiri ahụ ruru ugwu ndị na-ebelata ókè nke ụsọ oké osimiri ma na-eme ka ụyọkọ mmiri dị warara.
Ihu igwe na gburugburu ebe obibi nke Apennines
Ogologo ugwu a dum nwere oke ugwu Mediterenian ma, ya mere, anyị na-ahụ ahịhịa ndụ dị na ndịda nke nwere ubi vaịn, oliv na osisi citrus. Ihe mere ugwu a ji gaa njem nleta nke ndị njem nleta bụ ọtụtụ n'ime ókèala ya dị n'ọhịa na-enweghị ọkụkụ. Calcareous phenomena juru ebe niile. Nkume ndị a na-esite na ụlọ akwụkwọ sekọndrị na nke atọ.
Ọ bụ mpaghara ndị kasị daa ogbenye na ndị pere mpe na fortali maka ịbụ gburugburu ebe obibi. Ọnụ ọgụgụ mmadụ ma kwaga ebe ndị ọzọ na-arụpụta akụ na ụba. Ọ bụ ezie na ihu igwe kachasị dị na Mediterenian, n'ihi ịdị elu, okpomọkụ dị ala na oke iru mmiri na-arị elu n'afọ niile. N'oge ochie, osisi beech na chestnut kpuchiri ndị Apennines. Ọhịa na-eji nwayọọ nwayọọ na-apụ n'anya n'ihi oke ahịhịa. Ọtụtụ ìgwè ewu na atụrụ na ewu na-apụ apụ ma na-akwagharị ebe obibi nke ụdị ndị a.
Nwere taa, ndị mba ahụ ka na-eme transhumans. Ndị na-elekọta anụ ụlọ na-ata nri n’ugwu n’oge ọkọchị, n’oge udu mmiri, ha na-agbatị mbara ala dị n’ụsọ oké osimiri ebe okpomọkụ na-aka mma. Anụ ọhịa wolf, anụ ọhịa bea, nkịta ọhịa na chamois ji nwayọọ nwayọọ na-apụ n'anya n'ihi ọrụ mmadụ.
I nwere ike ikwu ya ndị Apennines kewara site na ugwu ruo na ndịda gaa n'akụkụ 4. Ọkpụkpụ ụrọ bụ maka ọdịda ala mgbe oge udu mmiri bịara. Mgbaze ndị a na-eyikarị obodo ndị dị na mpaghara dị nso egwu. N'oge ụfọdụ, ebibiri ya ma kpatara ọtụtụ mbibi na mpaghara ndị mmadụ bi n'ihi ndapụ ndị a.
Banyere ihe ndị ịnweta, anyị anaghị ahụ nnukwu akụnụba. Mana anyị nwere ike ịhụ nnukwu pyrites, ọla kọpa, bauxite, na mercury. A na-ahụ Mercury n'ọtụtụ buru ibu, yabụ, istali bụ onye na-ebute Mercury n'ụwa niile.
Enwere ike ịchọta ihe ndị a ọkachasị n'akụkụ etiti peninshula. Sicily, n’aka nke ọzọ, baa ụba sọlfọ. Ọ bụ ezie na ọ bụrụ na anyị amalite ịgụ ọnụ, isi akụ ndị Apennines bụ ike hydraulic. Ekele maka ike nke mmiri dị elu, enwere ike wepụta nnukwu ume ọkụ. Nke a bụ n'ihi na ọkwa na mbara ala siri ezigbo ike, ọkachasị na mpaghara Naples.
Na mpaghara Liguria ha jikọtara na ọdịda anyanwụ Alps. Ngalaba kachasị elu kwekọrọ na Tuscan-Emilian massif ebe anyị nwere ike ịchọta elu nke gafere elu mita 2.000 karịa oke osimiri. Ugwu kachasị elu na Northern Apennines bụ Ugwu Cimone jiri mita 2.165 dị elu.
Na mpaghara kachasị elu nke ugwu ahụ enwere ọtụtụ ndagwurugwu na obere ugwu dị ka ugwu Abruzzo, ugwu SIbilinos ma ọ bụ Gran Sasso, nnukwu ebe Corno Grande bilitere (2.194 m), ebe kachasị elu nke Apennines . N'ebe ndịda, ugwu ugwu na-etolite ụdị aak nke na-atụgharị na ndịda ọdịda anyanwụ. Mpaghara a bụ nke pụtara ìhè maka inwe nnukwu ugwu ọkụ dị ka Vesuvius. Uwa a bụkwa ihe na-akpata oke ala.
Hydrology, osisi na osisi
Dịka anyị kwuburu na mbụ, mmiri dị oke mkpa na ugwu a. Ọ dịpụrụ adịpụ maka ịnwe osimiri nwere nkuzi dị mkpụmkpụ. Osimiri kachasị mkpa bụ Tiber nke na-esi n'etiti ebe etiti ahụ gafere na Osimiri Tyrrhenian. Ọ nwere ogologo nke 405 km, nke maka osimiri dị obere. Osimiri ọzọ dị mkpa bụ Arno, nke ogologo ya dị narị kilomita abụọ na iri ise, nke malitere site n'akụkụ ọdịda anyanwụ na Tuscan massif, gafere Florence wee gbalaa n'ime Osimiri Lugurian.
N'agbanyeghị eziokwu na osimiri nwere a obere obere ndọtị, omume nke mmiri bụ otu n'ime ihe ndị kasị mkpa kacha mkpa efere ndị a ugwu ugwu. Banyere flora, e nwere ụdị ihe ndị dị n'ụsọ Oké Osimiri Mediterenian nke dịgasị iche na ịdị elu na ohere N'ebe ugwu anyị na-ahụ akpu, chestnut, beech na osisi pine n'ụba ka ukwuu. Ke edem usụk anyị na-ahụ ụfọdụ nke osisi dị ka ha bụ mastic, oleanders na myrtles.
N'aka nke ọzọ, a na-echekwa ụmụ anụmanụ nke ọma n'ihi ịdị adị nke ogige ntụrụndụ mba na mpaghara echedoro. Otu n'ime ụdị kachasị mara mma anyị nwere agba aja aja, anụ ọhịa wolf italic, lynx na ugo ọlaedo.
Enwere m olile anya na iji ozi a ị nwere ike ịmụtakwu banyere Apennines.
Pathzọ zuru ezu na edemede: Netwọk Mgbasa Ozi » Geology » Ugwu Apennine